FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA TERVUREN BELZA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika tervuren belza
Riot the Belgian Tervuren sary tamin'ny volana 13 dia nahatratra ny 'Tompondakan'i Kanada' ka ny anarany ofisialy vaovao dia: Can Ch. Ravenmasque Riot amin'ny fahavaratra CGN TT RNCL. Nahavita ny mari-pahaizana momba ny Temperament Test (TT), ary koa ny anaram-boninahitra Canine Good Neighbor (CGN) ary ny lohateny CARO Rally Obedience Novice miaraka amin'ny Cum Lade (isa faharoa avo indrindra) (RNCL). Ity sary ity dia nalaina avy hatrany taorian'ny iray tamin'ireo fampisehoana fampifanarahana CKC. Nentiny nody aloha izy tamin'ny sokajin-taonany ary Best Puppy of Breed.
Lisitry ny alika Tervueren mifangaro Belgian
Mpiandry belza Tervuren
Ny Tervuren Belzika dia manana endrika bika boribory amin'ny vatany. Rehefa jerena avy eo amin'ny ilany, ny topline ny montsony somary manondro kely dia mitovy amin'ny topline amin'ny karandohany. Ny fijanonana dia antonony. Ny molotra mainty dia tery. Ny maso antonony sy miendrika amandy dia mainty volontany. Ny sofina miorina dia telozoro endrika ary ny haavony dia mitovy amin'ny sakany. Tonga hatreny amin'ny kiho ny tratra. Mahitsy, mifanitsy ary mitsangana amin'ny tany ny tongotra. Ny topline dia avo lenta, somary mitongilana amin'ny malazo. Matetika dia esorina ny lalàn'andriamanitra. Toy ny saka ny endrin'ny tongotra. Mihaona amin'ny hety na manaikitra ny nify. Ny rambony dia matanjaka amin'ny fotony ary ny taolana dia mahatratra ny hock. Ny palitao roa sosona dia mahatohitra ny toetr'andro miaraka amin'ny volo mpiambina lava sy be dia be. Ny halavan'ny palitao henjana dia antonony hatramin'ny halavany miaraka amin'ny volo amin'ny loha, tongotra ary ivelany ivelany amin'ny sofina izay fohy kokoa. Ny akanjo ambany dia matevina ary ny akanjo ivelany dia mahitsy miaraka amin'ny tendrony mainty. Ny volom-borona dia eo amin'ny vozony izay tsy dia malaza amin'ny vehivavy. Misy volo lava kokoa manalalaka ny vodin-damosina sy ny tongony eo aloha izay misy volo be dia be amin'ny rambony. Ny lokon'ny palitao dia misy maonandoha manan-karena amin'ny russet, na aloky volondavenona misy tendro mainty. Ny tratra sy ny rantsantongony ary ny saokany dia mety fotsy. Maizina matetika ny palitao rehefa mihalehibe ilay alika.
Ny Tervuren Belzika dia iray amin'ireo mpiandry ondry efatra belza. Alika tena mamirapiratra sy mpankato, tapa-kevitra izy ary mandinika miaraka amin'ny fikajiana fiarovana sy faritany mahery. Mifandraisa tsara hisorohana azy tsy ho saro-kenatra na mora tohina. Tervurens Belzika dia mila tompona za-draharaha izay hentitra, nefa tsy mavesatra tanana. Raha masiaka ianao na mahery setra dia ho lasa fiaraha-miasa. Ny tompony dia mila mampiseho fahatokisana, fahefana voajanahary amin'ny alika. Fitsipika mifanaraka tsy maintsy apetraka ary atao mazava. Fiarovana voajanahary ity karazany ity ka tokony hampiofanina sy hifaneraserana tsara hatramin'ny fahazazany. Ny alika kely dia tokony ampifandraisina hatrany am-bohoka. Tsara ho an'ny fankatoavana ny asa sy ny fifaninanana, mahatonga azy ireo ho polisy tsara ireto alika ireto amboa mpiambina . Ity karazana asa ity no asan'izy ireo voalohany. Na izany aza, manao biby fiompy tena tsara izy ireo raha manana tompona afaka manohitra ny sainy amin'ny fisian'ny fitarihana. Izy ireo dia mailo hatrany, mailo ary tsy mivadika. Ny Tervuren Belzika dia tsara amin'ny ankizy raha mifanerasera tsara amin'izy ireo. Ity karazana ity dia mila tafiditra ao amin'ny fianakaviana fa tsy hihidy ao anaty tranon-kenna. Mila fitarihana izy ireo, fanatanjahan-tena isan'andro miaraka amin'ny fiofanana sy ny fiarahana, satria raha tsy misy izany dia mety manjary manimba ary sarotra tantanana. Ny Tervuren Belzika dia angovo avo, manana fahaizana ara-tsaina avo lenta ary mora azo. Mila asa hatao izy ireo, indrindra raha mifanerasera amin'ny tsipika fiasana ianao. Mitandrema rehefa mampiditra an'ity alika ity amin'ny biby fiompy tsy kaninina kely . Mety hanjakazaka amin'ny alika hafa izy ireo ary mila tompona afaka mifampiresaka amin'ilay alika fa fitondran-tena tsy ilaina ny manjaka. Raha mifanerasera tsara amin'ny saka sy biby hafa izy ireo, dia tsy tokony hisy olana izany. Tervurens Belzika dia mety aseho amin'ny fomba voajanahary fiompiana fiompiana toy ny fanenjehana sy ny fihodinana, ny fivezivezena mora foana mandritra ny ora maro ary ny fikitikitihana ny voditongotry ny olona. Tsy maintsy ampianarina izy ireo mba tsy hanao izany amin'ny olona. Alika be fitakiana ity. Mila tompona efa za-draharaha satria mora sarotra ny mifehy raha tsy hain'ny tompony ny mitantana azy. Ny fomba itondran'ny tompony ny alika dia mety hiteraka fahasamihafana lehibe amin'ny toetrany sy masiaka . Miresaha amin'ny olona efa za-draharaha amin'ny karazany alohan'ny ividiananao ny alikanao. Matetika ireo alika ireo dia mahavariana fa tsy miorina amin'ny rakitsoratry ny zava-bita fotsiny ny fividiananao. Alao fotsiny ity karazana alika ity raha azonao tsara ny dikan'ny atao hoe Alfa .
lhasa apso rat terrier mix
Milanja: Lehilahy 65 - 75 pounds (29 - 34 kg) Vehivavy 60 - 70 pounds (27 - 32 kg)
Ity karazana mafy orina sy salama ity dia tsy manana olana ara-pahasalamana lehibe. Ny ahiahy kely sasany izay efa hita dia ny androbe, ny aretin-koditra, ny olan'ny maso, ny mahamenatra be loatra, ny halozatra tafahoatra ary indraindray ny tavy andilan-tratra sy ny tavy sambo. Aza atao be loatra ny fampinonoana an'io karazany io, satria manana fironana hanjary matavy loatra sy kamo.
beagle Basset nanenjika Mix sary
Ny Bervuren Belzika dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Izy io dia mavitrika mavitrika ao an-trano ary hahavita tsara indrindra amin'ny tokotany iray farafahakeliny. Aleon'ity karazany ity ny toetrandro mangatsiaka, fa mifanaraka tsara amin'ny hafa. Afaka miaina ivelan'ny trano izy io fa aleo miaraka amin'ny olony.
Alika miasa io izay zatra fiainana an-kalamanjana miasa. Raha izany dia mila fanatanjahan-tena betsaka izy, ao anatin'izany ny a dia an-tongotra lavitra isan'andro . Ho fanampin'izany, dia handray soa be dia be ny fandroahana faran'izay betsaka araka izay azo atao amin'ny faritra azo antoka.
king charles poodle afangaro alika kely
Ny Tervuren Belzika dia manana palitao lava, mahitsy, salantsalany, akanjo ivelany mavesatra ary akanjo matevina izay mitaky fikorohana sy fikosehana isan'andro. Atsaharo ny tsihy izay miorina, indrindra amin'ny ruff sy amin'ny tongotra, ary volo manaparitaka eo anelanelan'ny rantsantanana sy amin'ny sofina ivelany. Ity karazana ity dia mpamafa hazavana tsy tapaka, miaraka amina lehilahy mandatsaka be indray mandeha isan-taona ary ny vehivavy indroa isan-taona. Ny palitao dia mila miborosy tsara tsara indray mandeha na indroa isan-kerinandro.
Ny Tervuren Belzika dia nantsoina ho an'ny tanànan'i Tervuren Belzika. Izy io dia iray amin'ireo karazana efatra amin'ny zanak'ondry belza, ny Tervuren Belzika, Groenendael Belzika , Malisiana Belzika ary ny tsy dia malaza loatra Laekenois belza , izay mizara fototra iraisana. Any amin'ny ankamaroan'ny firenena sy klioban'ny fiompiana ny alika efatra dia heverina ho karazany iray ihany miaraka amin'ny karazany maro karazana amin'ny karazana palitao. Ny alika efatra dia mizara fari-pahaizana amin'ny firenena rehetra afa-tsy ny AKC, izay hatramin'ny 1959 dia manaiky azy ireo ho karazany misaraka ary tsy manaiky ny iray amin'ireo efatra (ny Laekenois ), fa ny UKC, izay rezistra amerikana koa dia manaiky ny karazany efatra ho karazany iray. Miovaova sy mahira-tsaina izy, ny karazany efatra amin'ny vala Belzika dia manan-talenta amin'ny talenta isan-karazany, ao anatin'izany fa tsy voafetra ho azy, ny asan'ny polisy toy ny rongony sy ny fikarohana ny baomba, ny fiarovana ary ny Schutzhund, ny fikarohana sy ny famonjena, ary koa ny fankatoavana, ny hakingana, ny fanarahana, ny fiandrasana. , sled ary hisintona sarety ary ho torolàlana ho an'ireo jamba sy mpanampy ireo sembana. Ireto alika avo lenta ireto ary tena marani-tsaina dia mila fitarihana, mila fanamby ary ampiasaina isan'andro ary noho izany tsy natao ho an'ny rehetra, fa afaka manao namana akaiky fianakaviana amin'ny tompony marina. Ny Malisiana Belzika no voalohany amin'ireo mpiandry ondry efatra nametraka karazana. Mandra-pananganana ny efatra hafa amin'ny karazany dia nantsoina hoe 'Berger Belge a poil court autre que Malinois,' izay midika hoe 'Sheepdog miakanjo fohy Belzika izay tsy i Malinois.' Ankehitriny, ny vala efatra dia malaza any Belzika, miaraka amin'ny Laekenois sy Malinois izay matetika ampiasaina ho alika karazana miasa noho ny Belzika Groenendael sy Tervuren fa ny karazana rehetra dia mbola mahatonga mpiasa tena mahay.
ABTC = Club Tervuren Belgian amerikana
Aripaho i Tervuren Belzika
'Ity i Chloe, mpiandry ondry tervuren belza antsika, ririnina lasa teo. Araka ny fantatrao dia tiany ny lanezy. Toy ny Terv mahazatra, i Chloe dia mety ho mailo kely amin'ny olon-tsy fantatra amin'ny voalohany (manao azy ho alika mpiambina tsara ho an'ny trano), saingy manafana izy ary mangataka fihinana. '
mixer heeler manga basset
Chloe ilay Belza Tervuren mankafy ny lanezy
Manakorontana ny alika kely Belzika Tervuren amin'ny 5 herinandro - Can Ch. Ravenmasque Riot amin'ny fahavaratra CGN TT RNCL
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Tervuren Belzika
Sary Tervuren belza 1
alika malamute afangaro amboadia
anglisy bulldog basset hound mix
alika inona no clifford
Boston terrier manga heeler Mix
mametraka alfa amin'ny alikao
karazana alika tsara indrindra ho an'ny fihazana sifotra